नेपालले रच्याे ओडीआईमा विश्व कीर्तिमान, अमेरिका ३५ रनमै अलआउट ! | NayaMedia
नेपालले रच्याे ओडीआईमा विश्व कीर्तिमान, अमेरिका ३५ रनमै अलआउट !
बुध, माघ २९, २०७६ (February 12, 2020 2:15 pm) मा प्रकाशित
३५ रन मात्र बनाएकाे अमेरिकाकाे याे ओडीआईको सर्वाधिक थोरै रन
नेपालले एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा विश्व कीर्तिमान रचेको छ । आईसीसी विश्वकप लिग-२ एकदिवसीय क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिकालाई ३५ रनमै अलआउट गर्दै विश्व कीर्तिमान रचेको हो ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको अमेरिकाले १२ ओभरमा अल आउट हुँदै ३५ रनमा मात्रै जोड्न सफल भयो । यो ओडीआईको सर्वाधिक थोरै रन हो । यस अघि सन् २००४ मा जिम्बावे श्रीलंकासँग १८ ओभरमा ३५ रनमा अल आउट भएको थियो ।
अमेरिकालाई सस्तैमा समेट्नका लागि लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले ६ विकेट लिए । उनले ६ ओभरमा १६ रन खर्चेर ६ विकेट लिए । यो सँगै नेपालबाट ओडीआईमा ६ विकेट लिने सन्दीप पहिलो खेलाडी बनेका छन् ।
सुशन भारीले ३ ओभरमा ५ रन खर्चिदै ४ विकेट लिए । अमेरिकाका जेभियर मार्सलले १६ रन बनाउनु बाहेक अरुले ४ रन कटाउन सकेनन् । अमेरिकाका चार ब्याट्सम्यानले रनको खातासमेत खोल्न सकेनन् ।
नेपालले पहिलो खेलमा अमेरिकालाई ३५ रनले हराएको थियो । अमेरिकाले सिरिजमा कुनै जित निकाल्न सकेको छैन । ओमरले भने चारवटै खेल जितेको छ । नेपाल ओमनसँग दुवै खेलमा पराजित भएको थियो ।
ओडीआई खेलकुद विश्व कीर्तिमान
बुध, माघ २९, २०७६ (February 12, 2020, 2:15 pm) मा Naya Media द्वारा अभियान स्वाभिमानको अन्तर्गत प्रकाशित